आज (मंसिर १७)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक कारोबार ?| Corporate Nepal
आज (मंसिर १७)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक कारोबार ?
मंसिर १७, २०७८ शुक्रबार ०६:०९
आज २०७८ साल मंसिर महिनाको १७ गते शुक्रबार, मंसिर कृष्णपक्षको चतुर्दशी तिथि । आज बालाचतुर्दशी रहेको छ, आज आफ्ना दिवंगत पितृहरुको सम्झनामा शतबीच छर्ने गरिन्छ । आज विश्व अपाङ्ग दिवस पनि रहेको छ ।
आफ्नो कामप्रति लगावका साथ क्रियाशिल रहन मन लाग्ने छ । मेहनतको प्रतिफल पनि प्राप्त हुने छ । पेशागत जीवनमा उचित मुल्यांकन हुने छ । दयालु खालको व्यक्तित्व हुने भएकाले अरुले पनि सहज लिने छन् । परिवारमा शान्तिको वातावरण आउने छ ।
मनमा दुविधाका क्रम एकपछि अर्काे गरि आउने हुँदा त्यसले मनमा एक प्रकारको अशान्ति छाउने छ । आवश्यकता भन्दा धेरै बोल्ने गर्नाले हुन लागेका कामहरु पनि बिग्रने छन् । पेशागत जीवनमा विभिन्न चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने भएकाले संयमित रही कदम चाल्नु होला । रिस कडा हुने छ ।
यात्रामा मज्जा आउने छ । सृजनशिल व्यक्तित्व भए तापनि व्यावहारिक हिसावले अलि सहज हुन जाने छैन् । पेशागत जीवन शुभ रहने छ, अरुले कदर गर्ने छन् । थप जिम्मेबारी र कामको दायित्व प्राप्त हुने छ । आम्दानीमा बृद्धि हुने छ । बोली भने संयमित गर्दा शुभ रहने छ ।
रंग रमाईलोमा सहभागि हुन पाइने छ । खर्च पनि बढ्न जाने छ । प्रेम साथ र समर्थन प्राप्त हुने छ । पेशागत जीवन सहज रहने छ । प्राविधिक क्षेत्रमा आवद्धहरुको आम्दानीमा बृद्धि हुने छ । रिस नियन्त्रणमा भने गम्भीर प्रयास गर्नुहोला । बोलीको प्रभावकारीता बढाउन ध्यान दिनु उत्तम हुने छ ।
रंग रमाईलोमा पनि मन स्थिर हुने छैन् । मनमा चञ्चलाताका क्रमहरु धेरै देखिने हुनाले मन नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउँदा शुभ रहने छ । पेशागत क्षेत्र औसत अवस्थामा रहने छ । दाम्पत्य जीवनमा बादबिबाद र चर्काचर्कीको चुनौति देखिएकाले कम बोल्ने गर्नु नै उत्तम हुने छ ।
मुद्धा मामिला र चर्काचर्कीका विषयमा सतर्क रहनु नै उत्तम हुने छ । विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा जबर्जस्ति फस्ने खतरा देखिएको छ । पेशागत जीवन असन्तोषजनक रहने छैन् । आम्दानीको हिस्सा अनावश्यक खर्च हुने चुनौति देखिएको छ । व्यक्तित्व भने दृढ नै रहने छ ।
सवारीसाधनले दुःख दिने छ । परिवारमा भने सुमधुर सम्बन्ध स्थापना हुने छ । पेशागत जीवन औसत प्रकृतिको हुने छ भने आम्दानीमा गिरावट आउने छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दृढ खालले अडिग रहने व्यक्तित्व हुने छ । माटोसँग जोडिएको विषय जस्तै घर घडेरी तथा जग्गा जमिनको कारोवारबाट लाभ मिल्ने छ ।
नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्ने तर्फ मन जाने छ । साझेदारीमा गरिएका काममा चुनौतिहरु देखा पर्ने छन् । दाम्पत्य प्रेममा मधुरताको कमि आउने छ । पेशागत क्षेत्र सोचे जस्तो वा योजना बनाए जस्तो हुने छैन् । मनोबल कमजोर भएको व्यक्तित्व हुने हुँदा अरुले हेप्ने चुनौति देखिएकाले यसमा सजग भई व्यावहार गर्नुहोला ।
पेशागत जीवनमा प्राप्तिहरु हुने छन् । मनमा दृढताका मात्रा आउन थाल्ने छ । बोली मिठो हुने भए तापनि बेलाबेला अनौठो खाले रुखोपना देखा पर्न जाँदा काम बिग्रने छ । जीवनसाथिको साथले ठुलो अर्थ राख्ने छ । बौद्धिक क्षेत्रप्रति उदासिनता आउने छ । अरुलाई सहयोग गरौँ गरौँ लाग्ने छ ।
मानसिक दबाबको महशुस भइरहने छ । सपना नराम्रो देखिने र त्यसले जीवनमा नराम्रो प्रभाव पार्ने हो कि ? भन्ने विषयले असाध्यै पिरोल्ने छ । पेशागत जीवन औसत खालको हुने छ । कार्य सफलतामा मनको अन्योलताले प्रभाव पार्ने छ । बोलीको प्रभाव बढ्ने भएकाले अरुको विश्वास आर्जन गर्न सक्दा काममा सफलता मिल्ने छ ।
सवारीसाधनले धोका दिने छ । नयाँ सवारीसाधन किन्नु पर्ने दबाब सृजना हुने छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । पेशागत जीवनमा पनि सकारात्मक नतिजाहरु देखा पर्न जाने छ । प्रतिष्पर्धात्मक स्वाभावमा गिरावट आउन सक्ने भएकाले सजग रहनु नै उत्तम हुने छ । दाम्पत्य जीवनमा मधुर वातावरण कायम रहने छ ।
मन असाध्यै कारुणिक खालको हुने छ । यसले गर्दा व्यक्तित्व आफ्नो कर्मप्रति भन्दा भावनात्मक विचारमा छरिन पुग्ने छ । मन नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । धर्म–अध्यात्मप्रति रुचि बढ्दे रहने छ । पेशागत जीवन अनुकुल रहने छ । आम्दानीमा पनि बृद्धि देखिने छ । परिवारमा एकलकाँटे स्वाभाव हुने भएकाले सौहार्दतामा छलफल गर्ने तर्फ जोड दिनु उपयुक्त हुने छ ।
जेठ ३, २०७९ बुधबार
आज (जेठ ४)को राशिफलः तपाईंको पेशा, व्यवसाय, शेयर कारोबार कस्तो रहला ?
जेठ २, २०७९ मंगलबार
आज (जेठ ३)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, शेयर कारोबार ?
जेठ १, २०७९ सोमबार
आज (जेठ २)को राशिफलः तपाईंको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक कारोबार कस्तो रहला ?
बैशाख ३१, २०७९ आइतबार
आज (जेठ १)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक कारोबार ?
बैशाख २८, २०७९ बिहिबार
आज (वैशाख २९)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, शेयर कारोबार ?
बैशाख २७, २०७९ बुधबार
आज (वैशाख २८)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक कारोबार ?
रिभर फल्सको आईपीओमा १८ लाख बढीको आवेदन
शेयर कर्जामा ४/१२ को सीमा हटाइदिन लगानीकर्ताद्वारा गभर्नरसँग माग